Fanjifana fitaovana ao an-trano. Mianara mifehy ny faktiora amin'ny herinaratra | Fanavaozana maintso
Fanjifana fitaovana ao an-trano
Rehefa mividy fitaovana vaovao isika dia tadiavintsika ho mahomby, mora ampiasaina ary hanatanterahana ireo asa mifanaraka aminy. Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny fampandrosoana teknolojia dia ny fanjifana kojakojan-tokantrano nihena noho ny fanatsarana azy fahombiazan'ny angovo. Angamba ho tonga aty amintsika ny faktioran'ny herinaratra ary gaga isika amin'ny tarehimarika hitanay ary noho izahay tsy manisy fiheverana ny fampiasana fitaovana elektrika sasany mandany betsaka noho ny hafa.
Fantatrao ve izay lanin'ny milina fanasan-damba na ny hobin'ny seramika? Manana vidiny mitovy amin'ny televiziona na fanamainana volo ve izy ireo? Raha te hahafantatra ianao hoe inona ny fihinanana kojakoja ao an-tokantrano sy ny fiantraikan'izany amin'ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra dia tohizo hatrany ny famakiana ity lahatsoratra ity.
1 Famaritana isan-karazany ny fitaovana ao an-trano
2 Famaritana fahombiazan'ny angovo
3 Inona ny fihinanana ny vata fampangatsiahana sy ny milina fanasan-damba?
3.1 Vata fampangatsiahana
3.2 Milina fanasana lamba
Famaritana isan-karazany ny fitaovana ao an-trano
Miharihary fa tsy ny fitaovana elektrika rehetra no mila angovo mitovy hiasa. Ny sasany matanjaka kokoa ary ny sasany kely kokoa. Ny tsirairay dia samy manana ny anjara toerany ao an-trano ary, Miankina amin'ny fampiasana sy ny fahita matetika no handaniantsika angovo bebe kokoa na latsaka. Ohatra, afaka manana fahitalavitra lava kokoa isika mba hananana fanjifana mitovy amin'ny an'ny mpanasa lovia ho an'ny fanasana tanteraka. Ao anatin'ireo karazana fitaovana tsirairay dia tsy maintsy dinihintsika ihany koa ilay maodely. Tsy ny mikraoba na ny vata fampangatsiahana rehetra no mihinana zavatra mitovy.
Mandeha haingana ny teknolojia ankehitriny. Ny fanjifana angovo isaky ny fitaovana dia mahomby hatrany ary afaka manampy antsika hitsitsy amin'ny faktioran-jiro. Na izany aza, na manao ahoana na manao ahoana ny fahombiazan'ny fitaovana iray, raha tsy ampiasaintsika tsara izy io, hiafara amin'ny fandaniana azy ihany ianao ary tsy maintsy aloa ao am-paosinao izany.
Satria samy hafa ny maodely sy ny marika amin'ny appliance, dia manana ny mari-pahaizana mahomby amin'ny angovo izahay izay ahafahantsika mahafantatra ny fanjifana antsipirihany an'io fitaovana io resahina. Ho fanampin'izany, mamela antsika hahafantatra toetra hafa manan-danja toy ny tabataba entiny mandritra ny fotoana iasany, ny rano laniny (amin'ny milina fanasan-damba, ny fanasana vilia, sns.) Ary ny hery lehibe ananan'izy ireo (mifandraika amin'ny ny herinaratra nifanarahana izay natao tao an-trano).
Famaritana fahombiazan'ny angovo
Ny fampiasana an'ity marika ity ho referansa ilaina amin'ny fividiananao na tsia dia tena ilaina mba hitsitsiana angovo. Rehefa hividy fitaovana iray isika dia tsy tokony hijerena ny vidiny fotsiny, fa izay ho lany amintsika any aoriana. Tokony hieritreritra ianao fa ny vidin'ny fitaovana dia tsy andoavam-bola amin'ny fotoana iray tsy fifehezana toy ny ho lanintsika amin'ny fampiasana azy an-taonany maro io.
Hanome ohatra iray isika mba hahazoany tsara kokoa. Raha mividy milina fanasan-damba izay 300 euro isika nefa manana angovo mahomby A +, dia handany bebe kokoa mandritra ny androm-piainany mahasoa kokoa noho ny hoe mividy milina fanasan-damba izay 800 500 dolara isika, nefa manana fahombiazana A +++. Izany hoe, amin'izany fotoana izany dia handany 10 euro bebe kokoa amin'ny fividianana ny milina fanasan-damba isika. Na izany aza, mazàna ny milina fanasan-damba dia maharitra mihoatra ny 10 taona. Ao anatin'ny XNUMX na mihoatra ny taona, azo antoka fa ilay manana fahombiazana A +++ dia nanampy anao hanangona vola ary hitahiry be aza amin'ny fanjifana herinaratra.
Priori, rehefa handeha hividy fitaovana isika dia tsy mijery afa-tsy ny maodely sy ny vidiny. Ny torohevitra Ny fieritreretana ny fitaovana apetraka sy ny fampiasana ary ny tombana amin'ny fotoana hanompoany antsika. Ny hobin'ny seramika, ny televiziona, ny microwave, dia fitaovana elektrika maharitra mandritra ny taona maro ary mendrika ny hijerena ny fahombiazany. Raha tsy izany dia hahita tsy ampoizina isika rehefa mamaky ny vidin'ny faktioran-jiro.
Handinika ny fanjifana ireo fitaovana roa lehibe indrindra ao an-trano izahay.
Inona ny fihinanana ny vata fampangatsiahana sy ny milina fanasan-damba?
Fitaovana roa tsy afaka banga ao an-trano ireto. Zava-dehibe izy ireo ary tokony hampiasaina eny na eny. Ny vata fampangatsiahana dia tokony ho mavitrika foana ary tsy dia misy fitsaharana. Etsy ankilany, ny milina fanasan-damba dia mandeha eo anelanelan'ny 2 sy 4 isan-kerinandro, arakaraka ny isan'ny olona mipetraka ao an-trano sy ny fomba fiainany. Noho io antony io dia fitaovana elektrika roa izy ireo izay hampiasa lanja lehibe ao an-trano ary ho hita taratra ao amin'ny volavolan-dalàna.
Ny vata fampangatsiahana mihitsy tsy mandany angovo firy. Tsy zavatra mila hery be dia be hampangatsiahana ny sakafo. Na izany aza, ny mampiakatra ny fihinanana azy dia mifandray foana. Izany no antony mahatonga ny vata fampangatsiahana maka saika 20% amin'ny totalin'ny fanjifana angovo trano. Antony ampy io ka, rehefa mividy vata fampangatsiahana dia manadihady ny mari-pamantarana fahombiazan'ny angovo amin'ny tsatoka sy famantarana. Safidio ireo vata fampangatsiahana ireo 170-190 KWh isan-taona ihany no laniny. 20-30 euro isan-taona ihany no andikana izany.
Raha vantany vao nodinihina izany dia tonga ny fehin-kevitra fa raha lafo vidy kokoa ny vata fampangatsiahana satria mahomby kokoa, amin'ny fotoana maharitra dia ahazoana tombony satria ho kely kokoa ny fihinanana azy.
Andao isika hiroso amin'ny raharaha milina fanasan-damba. Mba hahafantarana hoe ohatrinona ny lanin'ny milina fanasan-damba, lafin-javatra maro no tsy maintsy raisina. Tsy tokony hijerentsika fotsiny ny mari-pamantarana ny angovo, fa tokony hojerentsika koa ny faharetan'ny tsingerin'ny fanasan-damba izay hataontsika matetika sy ny mari-pana napetrantsika amin'ny rano.
Tsy mitovy ny manasa amina lavareny lava sy amin'ny rano mafana noho ny mampiasa tsingerina maharitra 20 minitra sy amin'ny rano mangatsiaka. Miakatra avo roa heny ny fanjifàna. Na ahoana na ahoana, ny mari-pamantarana angovo dia hanome antsika famantarana tsara amin'ny fanjifana ankapobeny ary mila manao ny matematika fotsiny isika. Azo antoka izany mendrika ny misafidy ny handoa kely kokoa amin'ny fividianana ny milina fanasan-damba fa avy eo mitahiry amin'ny faktiora mandritra ny taona maro.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity ianao dia hahafantatra tsara kokoa ireo lafin-javatra tokony harahina mba hitsimbinana ny volavolan-dalàna momba ny herinaratra sy hianaranao bebe kokoa momba ny fanjifana ireo fitaovana ilaina indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Fanjifana fitaovana ao an-trano
Inona avy ireo zavatra azo averina simbaina
Iza no nahita herinaratra?